CAJIIB: Qoraal Ay Juventus Ku Baahisay Barteeda Twitterka Oo Qabsatay Baraha Bulshada, Kaddib Guushii Europa League Ee Sevilla & Inter Oo Lagu Maadsaday - Gool24.Net
CAJIIB: Qoraal Ay Juventus Ku Baahisay Barteeda Twitterka Oo Qabsatay Baraha Bulshada, Kaddib Guushii Europa League Ee Sevilla & Inter Oo Lagu Maadsaday
Jamaahiirta Juventus ayaa codsaday in mushaharka loo kordhiyo qofka maamula bartooda Twitterka kaddib markii uu soo dhigay farriin ay kooxdu ugu hambalyeysay Sevilla oo ku guuleysatay tartanka Europa League, isla markaana ku garaacday Inter Milan.
Sevilla ayaa 3-2 kaga badisay Inter Milan waxaanay ku guuleysatay markii lixaad tartanka Europa League, lagamana badin dhamaan lixdii jeer ee ay yimaaddeen finalka. Laba jeer oo isku xiga oo ahaa 2005 iyo 2006 ayay Sevilla kusoo bilowday guulaha koobkan, waxaanay ku xigsiiyeen saddex jeer oo xidhiidh ahaa 2014, 2015 iyo 2016 ka hor intii aanay sannadkan 2020 dib usoo ceshanin guulaha koobkan.
Gool uu Lukaku iska dhaliyey dhamaadkii ayaa Sevilla siiyey guusha, waxaana halkaas madax xanuun iyo qalbi jab ugu soo hoyday Inter Milan oo uu hoggaaminayay tababare Antonio Conte oo xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey aan wax koob ah ku guuleysan.
Kaddib markii ay ciyaartu dhamaatay, waxa baraha bulshada gaar ahaan Twitterka ku faaftay farriin lagu daabacay bogga Juventus oo loogu hambalyeeyey Sevilla iyadoo lagu xumaynayo Inter Milan oo uu macallin u yahay tababarihii hore ee Juventus ee Antonio Conte.
Farriinta Juventus ay qortay ayaa ahayd: “Hambalyo Sevilla, guusha Europa League.”
— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 21, 2020
Jamaahiirta Juventus ayaa markiiba si weyn uga falceliyey qoraalkan, waxaanay u dhigeen sidii ay ku maadsanayaan amaba kaga aargoosanayaan tababare Antonio Conte oo iska casilay kooxdooda markii uu tegayay Chelsea, kaddibna Inter Milan oo la tartamaysa uu gadhwadeen u noqday.
Taageereyaasha Juventus waxay dalbadeen in mushaharka loo kordhiyo qofka gacanta ku haya ee maamula barta Twitterka Juventus ee hambalyada Sevilla lagu qoray.